Shiinaha Haydarooliga Flap Telescopic Silsilad warshad iyo soo saarayaasha | Xinrun
Qalabka Haydarooliga waa nooc qalab casri ah oo rarka laga dejiyo. Ilaa iyo inta ay kaydsan tahay, si otomaatig ah oo toos ah ayay u dejin kartaa qalabka. Waxtarka dejinta ayaa aad u sarreeya boodhkuna wuu ka yar yahay. Qashin-qubka ayaa u baahan inuu bilaabo matoorka saldhigga hawo-qaadka si uu gacanta cadaadiska ugu kiciyo meel sare, ka dibna baabuur gondola oo si buuxda u buuran waxaa jiidaya mashiinka culus ee gawaarida, wuxuuna ku yaal gaariga taageeraya dogobka qashin-qubka. Qalabka gariirka saxanka gadaal ayaa waxaa riixaya silsiladda hareeraha waxayna u foorarsataa hal dhinac oo gondola ah, gacanta saxaafadda ayaa hoos u dhacda si ay u cadaadiso labada dhinac ee gondola. Marka saxanka keydku kaco, gacanta cadaadiska la riixo, iyo garabka gawaarida culus ee gawaarida ka baxa qashinka, qashin qubka wuxuu bilaabaa inuu kudaadiyo xawaaraha caadiga ah.
Qalabka wareejinta gadaal dambe ee qalabka korontada ayaa inta badan ka kooban farsamada safarka gawaarida, farsamaynta baaldiga, farsamada qalabka wax lagu qaado, qalabka wareejinta suunka, habka wareejinta qalabka suunka, farsamada qaadista baaldiga silsiladda, qashinka iyo qaab dhismeedka birta, iwm. baaldi silsilad wareegaya si dhuxusha looga qaado gawaarida illaa dherer cayiman ka dibna looga dejiyo suunka xamuulka. Wareejiyaha suunka ayaa alaabada u rari doona suunka xamuulka qaada ee dhulka fog, ama wuxuu ku tuurayaa qalabka ardaaga. Mabda'a shaqada ee farsamada safarka wiishka, farsamada wiishka, habka gudbinta suunka iyo farsamaynta tabaha ayaa la mid ah ta mldxs nooca.
1.Sulubada telescopic-ka waxaa loo isticmaali karaa mashiinka hawo-qaadashada, qashin-qubka hidda-shidaalka, qalabka korontada ku shaqeeya, wuxuu qaadi karaa 80-300 tan.
2.Waxaan soo saari karnaa silsiladda iyadoo la raacayo baahidaada, min hal marxalad illaa iyo 5 marxaladood, dhexroorka 100-300mm.
Cadaadiska shaqada ee ka imanaya 16-25mpa.
Hore: HSG01-E Taxanaha Qalabka Hydraulic
Xiga: Dhululubada Haydarooliga
Big caajis Haydarooliga
Silsilad laba-geesood ah
Silsiladda Gawaarida Gawaarida Dheer
Hees Heesta Haydarooliga Haydarooliga